Nantsi, ihlobo elilinde ixesha elide, kwaye ke ieholide ayikude. Ngubani phakathi kwethu akafuni ukukhawuleza ukuphuma kwindlela yokusebenza kwaye ahambe apho ilanga likhanya ngokugqithiseleyo, umoya uvelisa iintendelezo ezithambileyo, kunye nesandi se-surf caresses iindlebe. Kwaye ukuze ikhefu lakho lingabi luvavanyo lokunyamezela ngawe, sinqume ukuchaza ngokucacileyo oko kukunceda ukwazi xa uya eholide. Siyicinga, kuyinceda ukwazi icebiso lethu kuwo wonke umntu ohamba eyokuphumla "kwizilwandle ezine", kumabhendi eenqwelomoya ezidumileyo.
Ngoko, yintoni enomdla ukwazi xa uhamba eholide? Masiqale ngendlela, okanye mhlawumbi sithi, uhambo lwakho lokuhamba. Apha, kwindawo yokuqala, kuyakunceda ukuqaphela ukuba yindlela eyona nto ibaluleke kakhulu kwaye iyingxenye ebalulekileyo yeholide yakho. Ukuba uya eholide ngokusebenzisa inkampani yokuhamba - akuyona into engafanelekanga ukubuza malunga ne-inshurensi yezobugqirha kwaye ufumane iindlela eziphambili zohambo oluzayo. Buza kwakhona ukuba ufuna ukwenza iziqu kunye nalapho, kwaye nini, uhlobo luni lwezothutho olufanelekileyo ukuhamba.
Khumbula ukuba rhoqo, xa uhamba ngendlela ede, umzimba wethu uhlangabezana noxinzelelo oluthile kwaye ungakhathazeki. Ngenxa yoko, kufuneka uhlale ukhumbule izinto ezinjalo ezinzima njengokukhathala okugqithiseleyo, ukubonakala ngokukhawuleza kweempawu zolwandle okanye ukugula komoya, ukugula okunyamekayo (konke kuxhomekeke kwindlela yokuthutha). Konke oku, kwindawo yokuqala, kwenzeka ngenxa yokuphazamiseka kwezixhobo zokusebenza. Kwiimeko ezinjalo, ukunyusa i-acupressure okanye ukuphefumla ngokuthe tye kuya kusebenza. Ngendlela, ngaphambi kohambo, oogqirha bancoma ukuba "kunzima", ngokukhwela kwi-swings kunye nokujikeleza. Oku kuya kukunceda ulungiselele kwaye uqeqeshe i-vestibular devices.
Ukuba, ngokokuqala ngqa ebomini bakho, uhamba uhambo olukhuphayo okanye unqanawa, kufuneka ukwazi ukuba kufuneka ukhethe ezo zikhuni ezisezantsi. Oku kuya kunceda ukufudumala nokugulisa ulwandle kunzima kakhulu. Ukuba uphezu kwendiza, khumbula ukuba kuyacetyiswa ukuba udle ngaphambi kokuba ubaleke ngeeyure ezingama-4. Kufuneka kube lula kunye nokukhawuleza kweemveliso zokutya (i-muesli, imifuno, iziqhamo). Ngethuba lokuhamba kwendiza, ulungele ukunikela ama-juice amnandi, itiye kunye nekhofi. Yenza oku kunye nawo onke amanzi awalungiselelwe ngaphambili kunye ne-citric acid. Ngendlela, ukwenzela ukuba ngexesha lokungena kunye nokufika, ukwenzela ukuba ugweme ukuvakalelwa "kweendlebe ezithengiweyo", hlafuna i-chewing gum. Kwaye amagama ambalwa malunga nokuhamba. Ngenxa yokuba inqwelo, njengomthetho, umoya omile - kuya kuba luncedo ukusebenzisa i-cream ephuculayo ebusweni bakho.
Kodwa kwimeko xa ugqibe ukuhamba ngeholide ngemoto, zama ukuyeka zonke iiyure ezimbini ukutshiza umzimba wakho wonke nemilenze nge-gymnastics elula. Xa uhamba ngebhasi, kulo mzekelo, ukusila okulula kwezandla neenyawo kuya kunceda.
Ukusuka kwindlela eya kwimozulu. Siyicinga ukuba akushiyi elinye igama malunga nokutshintsha ngokukhawuleza kwiimeko zezulu kungathi akukho nto. Ngoko, xa ufika kwindawo efanelekileyo, apho uphaphazele ukuphumla kwakho, kufuneka ukwazi ukuba ngokukhawuleza ukugijima ukusuka egumbini ukuza kutsho ilanga akufanele. Zama ukunika umzimba wakho amandla okuzilungelelanisa nokuzisebenzisa kwiimeko ezintsha zemozulu. Uninzi lwazo zonke, utshintsho lwemozulu olunjalo lubonwa ngabantwana. Kumzimba wabantwana ngokuqhelekileyo ukujwayelekile kwiimeko ezintsha, kuthatha malunga neveki ezimbini ixesha. Ngoko hamba nomntwana wakho eholidini, bhetele kwinyanga. Abantwana abangaphantsi kweminyaka emithathu yokuguquka kwemozulu ephilileyo bayaphikiswa ngokubanzi.
Kwakhona, utshintsho olumandla kwimozulu lungaba nokunyuka kwezifo ezingapheliyo: ixinzelelo, i-cholecystitis, i-gastritis. Ngoko qaphela kakhulu. Ngaphezu koko, kuyimfuneko ukuba ukhumbule ukuba i-resort yakho isondele ngakumbi kwi-equator, i-radiation engaphezulu kakhulu ye-ultraviolet. Ngenxa yesi sizathu, zama ukuthabatha inani elincinane lokushisa ilanga.
Kuya kuba luncedo ukwazi ukuba ukuwela ngaphantsi kwe-hemisphere ukuya ngasemzantsi kuboniswa ngumzimba wethu kungcono kunecala langasentshona ukuya empuma. Oku kungenxa yokuba awuhambanga yonke indawo, okubizwa ngokuba yindawo yendawo. Qaphela ukuba umlinganiselo omkhulu weeyure phakathi kwesixeko sakho sasekhaya kunye neeholide yakho ukuya kuyo, kunzima ngakumbi kwaye kufuneka ulungele ixesha elide. Ingakumbi oku kusebenza xa, ngexesha lehlobo, uya kumazwe apho upholile okanye ngokuthe ngqo.
Kungenzeka ukuba kwezi zizathu, okokuqala ngentsuku zokuphumla kwakho, uya kuhlala ufuna ukulala, uya kufa ngenxa yentloko, ukuphazanyiswa kwamathumbu kunye nokutshintsha kwimijikelezo yokuya esikhathini.
Ukulungelelanisa kwakunokukhawuleza, kwaye utshintsho olungajabulisiyo kwimpilo yoluntu luye lwasemva, zama ngokukhawuleza ukuba ulungele ulawulo lwendawo (ubusuku bobusuku). Ngexesha lokuqala, musa ukugqithisa umzimba wakho, ukuyeka nayiphi na indlela yokusebenza. Vumela ukuhamba okungahambi kakuhle, kusasa ngaphambi kokutya kwasekuseni nangokuhlwa, ngaphambi kokulala.
Ngendlela, akusilo ukukhumbula ukutya okungaqhelekanga. Akuyimfuneko, xa uhamba eholide, ngokukhawuleza "hlala phantsi" kwizonambitha zeendawo zokutya zasekhaya. Khumbula ukuba ukutya okunjalo akuqhelekanga kwisisu sakho kwaye, ukuze uyilayishe ngokutya okungekho ngaphambili, akuyi kumnceda. Kucetyiswa ukuba uqale konke ukunambitha kokupheka okuqhelekileyo kunye neengxenye ezincinci. Kwaye ngoku ngokusela. Ukuba uqala ukutya ukupheka ezintsha ngeengxenye ezincinci, uze uphuze (ngokuqinisekileyo, ungabi ngotywala), unconywa kwisixa esikhulu kakhulu, ukuze umzimba wakho ungagcini. Ikhethelo elikhethekileyo kuwe liya kuhlambulula amanzi amaminerali, mhlawumbi ngaphandle kwegesi.
Lapha sichaza ngokufutshane kunye neenkcukacha eziphambili nezibalulekileyo zento ofuna ukuyazi eholidini, ukuba unqwenela ukuyichitha kwiindawo ezinxweme ezinqabileyo zamanxweme aziwayo kunye nezithandwa kwihlabathi. Gcina kubo - kunye neholide yakho iya kuba yinto engayibalekiyo. Inhlanhla!
Ukudansa kwi-pylon - ukuvuka kwamandla kunye nobulili
Uvuyo oluhle ngeKrismesi kwindinyana
Ukuphumla eSt. Petersburg, ukuzonwabisa, inkqubo yenkcubeko
Cream ukhilimu omuncu
Izizathu ezi-7 zokuhlala zedwa
Inkomfa yokuzivocavoca kwi-yoga
Ukunyamekelwa kwesikhumba kwindawo yokuhlamba, izilwanyana zamalungu
Ukutya ngokulahleka kwesisindo
Ukusetyenziswa kwamagqabi kumxholo we "ekwindla" kwisikolo nakwimabelana. Izandla zomsebenzi ezisetyenziswayo ngezandla ezivela kumagqabi ekwindla eyomileyo